Lokho Abadayisi Abadinga Ukukwazi Ngokuvikela Impahla Yengqondo | Martech Zone
Njengoba ukumaketha — nayo yonke eminye imisebenzi yebhizinisi - sekuya ngokuya kuncike kubuchwepheshe, ukuvikela impahla ebhaliwe kusungulwe phambili ezinkampanini eziphumelelayo. Kungakho wonke amaqembu wokumaketha kumele aqonde izisekelo ze umthetho wempahla yokusungula.
Iyini Impahla Engokwengqondo?
Uhlelo lwezomthetho lwaseMelika luhlinzeka ngamalungelo athile nokuvikelwa kwabanikazi bempahla. Lawa malungelo nokuvikelwa kudlulela ngaphesheya kwemingcele yethu ngezivumelwano zokuhweba. Impahla yengqondo ingaba yinoma yimuphi umkhiqizo wengqondo umthetho ovikela ekusetshenzisweni okungagunyaziwe ngabanye kwezentengiselwano.
Impahla yengqondo - kufaka phakathi okusunguliwe, izindlela zebhizinisi, izinqubo, ukudala, amagama ebhizinisi namalogo - kungaba phakathi kwezimpahla ezibaluleke kakhulu zebhizinisi lakho. Njengomnikazi webhizinisi kufanele uqonde ukuthi ukuvikela impahla yakho enomqondo kubaluleke njengokuvikela noma iyiphi enye impahla kubhalansi lakho. Kufanele uqonde amalungelo nezibopho ezihlotshaniswa nokwenza kahle futhi wenze imali ngempahla yakho yengqondo.
Usebenzisa umthetho we-IP ukuvikela impahla yakho yengqondo
Kunezinhlobo ezine eziyisisekelo zempahla yengqondo: amalungelo obunikazi, izimpawu zokuhweba, amalungelo okushicilela, nezimfihlo zokuhweba.
Uma usungule ubuchwepheshe bokuphathelene, ukuvikelwa kwelungelo lobunikazi kunika inkampani yakho ilungelo elikhethekile lokwenza, ukusebenzisa, ukuthengisa noma ukungenisa okusungulile noma okutholakele isikhathi esilinganiselwe. Uma nje ubuchwepheshe bakho buyinoveli, busebenza futhi bungaqondile, unganikezwa amalungelo akhethekile ekusetshenzisweni kwayo okuzoqhubeka isikhathi se-patent.
Ukugcwalisa ilungelo lobunikazi kungaba inqubo enzima futhi ende. I-United States isebenza ngaphansi kowokuqala ukufaka ifayili, hhayi okokuqala ukudala uhlelo, okusho ukuthi umqambi onosuku lokuqala lokufayila uzothola amalungelo egunya lobunikazi. Lokhu kwenza isikhathi sokufaka kwakho sibucayi. Ukuze kulondolozwe usuku lokufayila lwangaphambilini, amabhizinisi amaningi akhetha ukufaka kuqala ifayili lobunikazi besikhashana obulula nokuvikeleka. Lokhu kubanikeza unyaka wokuphothula isicelo se-patent esingewona okwesikhashana.
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi i-patent ekhishwe yi-United States Patent ne-Trademark Office (USPTO) isebenza e-United States kuphela. Uma inkampani yakho incintisana phesheya futhi idinga ukuvikelwa kwelungelo lobunikazi kwamanye amazwe, kufanele ufake isicelo yonke indawo lapho ufuna ukuvikelwa khona. Isivumelwano Sokubambisana Patent senza lokhu kube lula ngezinqubo zokufaka isicelo esisodwa selungelo lobunikazi emhlabeni jikelele ngasikhathi sinye emazweni angama-148 angamalungu.
Njengoba noma yimuphi uchwepheshe wezokumaketha azi, izimpawu zokuhweba ziyindlela ebalulekile yokuvikela imikhiqizo yenkampani. Izimpawu zokuhweba zivikela noma yiziphi izimpawu ezihlukile, ezifana nelogo noma igama lomkhiqizo, ezihlukanisa umkhiqizo wakho kwabanye emakethe.
Ukusebenzisa nje uphawu lokuhweba kwezohwebo kungaholela ekuvikelekeni komthetho okuvamile. Noma kunjalo, ukubhalisa amamaki akho ku-USPTO akuqinisekisi kuphela ukuthi uvikeleke ngokuphelele, kepha futhi kukhulisa isethi yamakhambi ongawathola uma othile ephula uphawu lwentengiso yakho. Ukubhaliswa ngakho-ke kunikeza izinzuzo ezinkulu ezinkampanini, kufaka phakathi isaziso esakhayo esidlangalaleni, ilungelo elikhethekile lokusebenzisa umaki maqondana nezigaba ezithile zezimpahla noma izinsizakalo ezisohlwini lokubhalisa, kanye nesizathu sombuso sokwenza noma yikuphi ukwephula umthetho.
Ukumaketha umkhiqizo ngokwemvelo kuhilela ukwenziwa kwemisebenzi yoqobo, kungaba ngesithombe sokukhangisa, ikhophi yokuhlela noma into ebonakala ilula njengokuthunyelwe kwemidiya yezokuxhumana. Lezi zinhlobo zomsebenzi zingavikelwa ngamalungelo obunikazi. Ilungelo lobunikazi luhlobo lokuvikelwa olunikezwa ngaphansi komthetho we-Federal copyright "wemisebenzi yokuqala yobunikazi" obekwe ngendlela ebonakalayo yokubonisa. Lokhu kungafaka phakathi imisebenzi yomqondo eshicilelwe futhi engashicilelwe njengezinkondlo, amanoveli, amafilimu nezingoma, kanye nekhophi lokukhangisa, ubuciko bezithombe, imiklamo, isoftware yamakhompiyutha, kanye nezakhiwo.
Umnikazi we-copyright angavimbela abanye ukuthi bathengise, benze, baguqule kabusha noma bakhiqize kabusha umsebenzi ngaphandle kwemvume — ngisho nemisebenzi efana naleyo esetshenziselwa injongo efanayo. Kubalulekile ukuqaphela, noma kunjalo, ukuthi amalungelo obunikazi avikela kuphela indlela yokukhuluma, hhayi amaqiniso ayisisekelo, imibono, noma izindlela zokusebenza.
Ngokuvamile, amalungelo okushicilela anamathisela ngokuzenzakalela kumdali womsebenzi omusha ngesikhathi sokudalwa kwawo, kepha futhi ungakhetha ukuwabhalisa ngokusemthethweni ne-United States Copyright Office. Ukubhaliswa kunikeza izinzuzo ezibalulekile, kufaka phakathi irekhodi lomphakathi lobunikazi, ukucatshangelwa okuthile kokusebenza, nelungelo lokuletha icala lokwephula umthetho nokuqoqa umonakalo ongaba semthethweni kanye nezimali zommeli. Ukubhalisa ne-US Customs nakho kukuvumela ukuthi uvikele ukungeniswa kwamakhophi ephula umthetho womsebenzi wakho.
Esinye isigaba sempahla eqanjiwe okubalulekile ukusivikela izimfihlo zenkampani yakho zokuhweba. “Imfihlo yezohwebo” ichazwa njengolwazi oluyimfihlo nolunobunikazi olunikeza ibhizinisi lakho ithuba lokuncintisana. Lokhu kungafaka noma yini kusuka ezinhlwini zamakhasimende kuya kumasu okukhiqiza kuya kuzinqubo ze-analytics.Izimfihlo zokuhweba zivikelwe kakhulu umthetho wezwe, ovame ukulingiswa ngemuva koMthetho Wezimfihlo Zokuhweba Ongafani. Umthetho uthatha imininingwane yakho yobunikazi njengemfihlo yezohwebo lapho:
Imininingwane iyifomula, iphethini, ukuhlanganiswa, uhlelo, idivayisi, indlela, inqubo, inqubo noma enye insimbi evikelwe;
Imfihlo yayo inika inkampani inani langempela noma elingaba khona kwezomnotho ngokungaziwa noma ukutholakale kalula; futhi
Inkampani ithatha imizamo efanelekile yokugcina imfihlo yayo.
Izimfihlo zokuhweba zivikeleka kuze kube nini nanini kuze kudalulwe obala imfihlo. Zonke izinkampani ngakho-ke kufanele zikugweme ukudalulwa okungahlosiwe. Ukuqalisa izivumelwano zokungavezi obala (ama-NDA) nabasebenzi nabantu besithathu kuyindlela evame kakhulu yezomthetho yokuvikela izimfihlo zakho zokuhweba. Lezi zivumelwano zibeka amalungelo nemisebenzi ephathelene nolwazi oluyimfihlo, futhi zikunikeze amandla uma kwenzeka kusetshenziswa izimfihlo zakho zokuhweba ngokungafanele.
Ukusetshenziswa budedengu kwenzeka lapho imfihlo yezohwebo itholwa ngezindlela ezingafanele noma ngokwephula ukuzethemba, futhi kwenzeka enkantolo. Ukuthi inkampani yakho iwasebenzise kangakanani ama-NDA kungaba yinto esetshenziswa yinkantolo ukuthola ukuthi ngabe uthathe "imizamo efanelekile yokugcina imfihlo," ngakho-ke kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi inkampani yakho isebenzisa ama-NDA akhiwe kahle ngenhloso yokuvikela i-IP yakho .
Ummeli We-IP Onolwazi Ungowokuqala Wokuvikela
Emvelweni wanamuhla wokuncintisana, kubalulekile ukuthi inkampani yakho iqonde ngokugcwele impahla yayo yempahla futhi ivikele kahle. Ummeli wempahla yokusungula angasiza inkampani yakho ukuthi ikhulise inzuzo yakho yokuncintisana ngecebo eliphelele lokuvikela i-IP.
Ummeli wakho we-IP uyindlela yakho yokuqala yokuzivikela kwabanye besebenzisa noma behlukumeza i-IP yakho. Ukuthi uzakwethu yini osebenzisana nommeli wangaphandle ofanelekayo, njengalapho usebenzisa i- Inethiwekhi ye-Priori, noma ukuqasha abeluleki besikhathi esigcwele abasebenza ezindlini, igqwetha le-IP likulungele kangcono ukugcina i-IP yakho ilungele ukuncintisana okufanele ibe yikho.
Tags: copyrightokwenziwe ngenqondoipumthethozomthethouphawu lokuhweba olusemthethwenikuqalapriori kwezomthethouphawu lokuhweba olubhalisiwetmizimfihlo zokuhwebauphawu lokuhweba
Uyini umthetho we-CAN-SPAM?